Eriri ngwugwu PET, China PET Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe, ndị na-ebubata ihe, ụlọ ọrụ -
NewsBudata site na ntaneetịKpọtụrụ anyị
Strapping Ngwá Ọrụ
Usoro nkwakọ ngwaahịa
PITA winding igwe
Nwere ike & karama
Osisi & Profaili
Foto Flọ ọrụ
Ngwá Ọrụ Pneumatic
Ngwá Ọrụ Aka
PET mbukota eriri
Product Nkowasi: PET na-ejikọ eriri na-eme ka polyester. O nwere ihe karịrị afọ 20 na China. PET eriri eriri bụ ndị kasị ewu ewu ọhụrụ gburugburu ebe obibi-echebe nkwakọ ihe iji dochie ígwè eriri na ígwè waya na ụwa. A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ osisi, akwụkwọ, ígwè, iko, ihe owuwu ụlọ, seramiiki, ngwa eletriki, ụtaba, eriri kemịkal, owu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. PET plastic eriri ọdịdị bụ uzo, elu bụ ewepụghị ma ọ bụ prismatic ụkpụrụ.
PET na-ejikọ eriri na-eme ka polyester. O nwere ihe karịrị afọ 20 na China. PET eriri eriri bụ ndị kasị ewu ewu ọhụrụ gburugburu ebe obibi-echebe nkwakọ ihe iji dochie ígwè eriri na ígwè waya na ụwa. A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ osisi, akwụkwọ, ígwè, iko, ihe owuwu ụlọ, seramiiki, ngwa eletriki, ụtaba, eriri kemịkal, owu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. PET plastic eriri ọdịdị bụ uzo, elu bụ ewepụghị ma ọ bụ prismatic ụkpụrụ.
Hunan Chuangli mbukota Co. Ltd mgbe niile rube isi na ngwaahịa dị iche iche. anyị na-enye dị iche iche PET plastic straps na kasị elu n'ibu Njirimara, kasị mụ mma na kasị elu technology. Anyị webatara akụrụngwa jikọtara ọnụ na ịgbado ọkụ nke mba ọzọ, "PET geogrid PET dị elu" nke akụrụngwa a na-ebubata eruola ọkwa ọkwa teknụzụ mba ụwa. Nwere ọgụgụ PET mmepụta akara nwere uru nke ike-azọpụta, elu arụmọrụ na elu na-eri-irè. Ngwakọta igwe na-ekpo ọkụ gas-eletrik anyị mepụtara maka ndị ahịa bụ ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ.
Kasị ere PET Nkọwapụta na Ngalaba
obosara × ọkpụrụkpụ (mm)
Wasatọ / mita (g)
LNwunye / n'arọ (m)
Lndom / mpịakọta (m)
Ferughị ala racture
Ihe edeturu: agba mgbe nile: ndu ​​ndu / oji, eriri ribbon: larịị / embossed; ọkọlọtọ ibu ： 20kgs / mpịakọta
Ngwunye Ọhụrụ Dị Ọcha
Ọkara nke ike PET agbụ Class M
Ike dị elu PET straps Class H
5f-501, Buildinglọ b22, Crelọ Ọrụ Creation Coalescence, Changsha County, Changsha City, 410100, Hunan Province.